Nhau - Chengetedzo yekushandisa kwekunze madziro mapaneru
Kana uchibata ekunze emadziro emadziro uye kurodha uye kuburitsa ekunze emadziro emadziro, kureba kutungamira kwemapaneru kunofanirwa kushandiswa sedzvinyiriro, uye iwo mapaneru anofanirwa kubatwa zvakangwarira kudzivirira kudhumhana nekukuvadza kune iwo mapaneru;
Paunenge uchibata jira rimwe chete, iro pepa rinofanirwa kufambiswa rakamira kuti zvidzivise deformation yaro jira.
Pasi pezasi pechokufambisa zvinoreva chinofanira kunge chakati sandara, uye ekunze madziro emadziro anofanirwa kugadziriswa mushure mekutwasuka kurodha kuitira kuti tirege kukuvara kwechigadzirwa nekuda kwekusunga zvakanyanya kwekunze kwemadziro emadziro panguva yekugadzirisa;
Deredza kudengenyeka panguva yekufambisa kudzivirira kudhumhana uye kunaya.
Iyo nharaunda yekuisa ekunze emadziro emadziro inofanirwa kuve nemhepo uye yakaoma, uye saiti inofanirwa kuve yakati sandara uye yakasimba;
Paunenge uchishandisa makwati ehuni akaenzana, ita shuwa kuti chigadzirwa hachina kuremara;
Kana yaiswa mumhepo yakavhurika, ekunze emadziro emadziro anofanirwa kufukidzwa zvizere nemachira asina mvura;
Kana uchichengeta ekunze emadziro emadziro, anofanirwa kuchengetwa ari kure neepamusoro tembiricha uye yakanyanya mwando nzvimbo, uye haifanire kusanganiswa nezvinhu zvinokanganisa zvakaita semafuta nemakemikari.
Kana uchivhura iyo yekunze wallboard package, iwe unofanirwa kuiisa yakati sandara kutanga, wozoiburitsa kubva pamusoro pechigadzirwa package, uye woburitsa bhodhi kubva kumusoro kusvika pasi;
Usavhure rekunze remadziro pani kubva kudivi kuti udzivise kukwenya pane ipaneru.
Mushure mekunze kwemadziro emadziro akachekwa, iyo yekucheka simbi mafirita anozonamirwa kumusoro uye incision yepaneru, iri nyore ngura. Iwo akasara mafirita esimbi anofanira kubviswa.
Munguva yekuvaka, kutarisisa kunofanirwa kubhadharwa kuchengetedza pamusoro pekunze madziro bhodhi kudzivirira kukwenya uye kukanganisa.
Dzivisa basa rekuvaka kana kuchinaya;
Munguva yekuvaka, dzivirira mukati memadziro ekunze ekunze kuti asabate nemvura kudzivirira mvura yemukati kuti isatsike kubva kumusoro, ichikonzera ngura uye ngura pamusoro pepaneru, ichideredza hupenyu hwayo hwebasa.
Dzivisa kuishandisa mune yakanyanya tembiricha, yakanyanya hunyoro, uye acid kuburitsa nzvimbo (semakamuri ekubhaira, makamuri emoto, matsime anopisa, mapepa ekugaya, nezvimwewo).
Yezvekutenderera kwakatetepa kumadziro, iyo inodziisa mhepo-inodziya mapaipi uye mapombi ekondensiti, iwo makwikwi anoenderana anofanirwa kuchengetwa pamberi pekugadzikwa kweplate. Usavhure maburi mushure mekuiswa kweplate.
Kana paine nhengo dziri kutsigira mamhepo anogadziridza, pedza mafekitori uye zvimwe zvivakwa zviri pamusoro pemadziro, iwo magetsi emagetsi uye mamwe maitiro anofanirwa kuitwa pamberi pemadziro emadziro uye zvigadzirwa zvekuisa zvisati zvaiswa.